FALANQEYN XASAASI AH: Qodobada Adag ee ay soo gudbiyeen Madaxda dawlad gobaleedyada & go’aamada adag ee soo baxay | Www.tusmo.net
FALANQEYN XASAASI AH: Qodobada Adag ee ay soo gudbiyeen Madaxda dawlad gobaleedyada & go’aamada adag ee soo baxay
KISMAAYO(P-TIMES)- Hogaamiyaasha dawladdaha xubnaha ka ah dawladda Faderaalka ee Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey ku shirsanaa magaalada Kismaayo, ayaa soo saaray go’aamo ka kooban 16 qodob oo u muuqda kuwa dhamaantood taabanaya waxyaabaha ay la wadaagaan dawladda Soomaaliya.
Si aad ah ayaa falanqeyn loogu sameeyey qodobada ay soo saareen Madaxda dawlad gobaleedyada dalka oo ay ugu horeyso qadiyadda ku saabsan arrimaha hadda taagan, waxayna diiradda saareen arrimaha muhiimka.
Warsidaha Puntlandtimes ayaa dul istaagyo kooban ku sameysay qodobada qaarkood soo baxay, gaar ahaana kuwa la xariira dhinacyada Amniga, Iskaashiga, Faderaalka, go’aamada Masiiriga ah iyo Arrimaha xasaasiga ah ee waqtigan, waxayna muujiyeen qodobada lasoo saarya siddan Hoose.
1- In si wadajir ah ay xiriirkii wadashaqayn u joojiyeen. Horay maamulada qaar ayaa kaligood go’aanka u qaadan jiray.
2- In ay dhisteen Gole kaligood u gaar ah, iyagoo Dastuurka xiganaya. Golohu wuxuu u muuqdaa awood cusub oo dheelitiraysa Dawlada.
3- In ay fashil ku xukumeen waxqabadkii Xukuumada ee bilihii la soo dhaafay ee dhinaca Siyaasada, Amniga iyo Dastuurka.
4- In Dawlada ay ka noqoto go’aankii Khilaafkii Khaliijka, maadaama laga dalbaday in khilaafka jira iyo qodobka 53 la cuskaday. Waxaa muuqata in magaca Khaliijka laga af gobaadsaday
5- In dawlada ay ka soo horjeedo hirgelinta Federaalka, ayna jiraan qorshe halis gelin kara In dalka dib ugu laabto marxaladihii la soo gudbay.
6- In wadahadal labada dhinac dhex mara keli ah lagu soo celin karo xiriirkii iyo wada shaqantii.